Location : Thailand Updated Date : 27,June 2019 Starting Price : 7,900,000THB
Address : Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Completation : 2021 Q4
Total Floor : 35 floor
Unit Mix : 1bedroom : 23.8 - 25.7sqm , 1bedroom plus : 31.7 - 33.3sqm , 2bedroom : 48.7 - 55.1sqm
Per Square Feet : 30,578THB
📣📣📣ယခုလက်ရှိ ဘန်ကောက်တွင် Official Launching မပြုလုပ်ရသေးပေမယ့် လူအများစု စိတ်ဝင်စားနေကြသော ကွန်ဒိုကတော့ Park Origin Phayathai Luxury Condo ပဲဖြစ်ပါတယ်။
🔔🔔🔔 ဘာကြောင့်လူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားနေရသလဲဆိုရင် သူများနိုင်ငံမှ ကွန်ဒိုအခန်းတော်တော်များများဖွဲ့ စည်းပုံဟာဆိုရင် ၀င်ဝင်ချင်း Kitchen Room ကို အရင်မြင်ရပြီးမှ ဧည့်ခန်း နှင့် အိပ်ခန်းများကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါသည်.
Park Origin Condo ထူးခြားချက်သည် အာရှလူမျိုးများအကြိုက် အခန်းဖွဲ့ စည်းပေးထားပြီး Kitchen Room ကိုလည်း Aluminium Slide door ဖြင့် အခန်းဖွဲ့ စည်းပေးထားသည့်အတွက် ထူးခြားသည့် အချက်(၁)ချက်ဖြစ်ပေသည်။
🔔🔔🔔 နောက်အချက်တစ်ခုကတော့ Bangkok မြို့ ၏ ငွေကြေးခိုင်မာဆုံး Developer များထဲမှ 1 to5စာရင်းဝင် Origin Developer မှ ဆောက်လုပ်မည့် Project ဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ ၏ အချက်ချာကျဆုံး မြို့ လယ်ခေါင်တွင် ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Phayathai BTS Station နှင့်လည်း 200 meters သာကွာဝေးပြီး ဘန်ကောက် မြို့ လယ်ခေါင်ရှိကွန်ဒိုမှ ပိုင်ဆိုင်ထားချင်သည့် မိတ်ဆွေများအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
‼️ Park Origin Phayathai is your freehold luxury home conveniently located in the heart of Bangkok and is only 200 meters away from Phayathai BTS Station & Airport Rail Link. ‼️
🔔 🔔🔔 ကွန်ဒိုကြီးသည် လူနေအခန်းများနှင့် ဟိုတယ်များ၊ Shopping Centre များပါဝင်သွားမည့် Mix Development စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး5Stars Hotel Group တစ်ခုဖြစ်သည့် Intercontinental Hotel Group ကြီးမှ ဟိုတယ်ပိုင်းကို တာဝန်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ကွန်ဒိုကြီး၏ Location နှင့် Developer ခိုင်မာမှု ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါသည်။ Condo Design သည်လည်း Singapore နိုင်ငံမှ World-renowned architect ဖြစ်သည့် Ong and Ong company မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
‼️It isamixed development that will be managed bya5-star hotel group (Intercontinental Hotel Group). It is designed by world-renowned architect firm Ong and Ong from Singapore. ‼️
Bangkok Condo Project များကို ၀ယ်ယူမည်ဆိုပါက စိတ်ချရပြီး မိတ်ဆွေတို့ လိုအပ်ချက်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ရွေးချယ်ဝယ်ယူစရာ စုံလင်လှသည့် Your Property Finder (YPF) International Agency ကို သာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါနော်...